Kwaziwa kahle kamhlophe kokubili eMoscow futhi amadlelo eMoscow emakethe "Gardener" kuyinto ibhizinisi jikelele yesimanje lwezeMpilo Usizo, lapho ungakwazi ukuthenga imikhiqizo at amanani aphansi izinjongo ezihlukile. Yilokho edonsela eziningi izivakashi emakethe "Gardener". Uyithola kanjani kuye, futhi singakanani isikhathi kuyodingeka ichithe ama kwi yezitolo ezinjalo? Lezi zinkinga abaluleke kakhulu, kodwa iba ubala uma umthengi obheka tags intengo. Futhi amanani nazi aphansi e Moscow. Kodwa ngenxa yokuthandwa bayanda emakethe "Gardener" yazuza ngemva sokuvalwa eziningana sites anjalo nakwezinye izindawo zempumalanga eMoscow, ngakho-ke kunengqondo ukuba babheke indlela lapha. Kutholwe inkampani Ukuhweba indawo ebanzi phezu ikhilomitha 14 eMoscow Ring Road, ohlangothini engaphakathi kuso. Eduze ezimpambanweni zomgwaqo emkhakheni engenhla.
Market "Gardener": kanjani lapho. Subway nebhasi
Akubona bonke abaneziphiwo imoto yabo. Kodwa ngisho noma ikhona, eMoscow, akunjalo ngaso sonke isikhathi imodi elula nalefanele zokuthutha. Kunezindlela eziningana ukuze uthole emakethe ethandwa "Gardener". Indlela ukufika kulo kusukela komhlaba, inkinga enkulu akuyona. Trade Enterprise Administration kwenza izivakashi yayo ukusebenzisa khulula ibhasi umzila. Mahhala Shuttle bebheke emakethe "Gardener" kusukela Metro Vykhino Lublin futhi njalo ngemva kwemizuzu engu amabili. Kodwa kungenzeka ukuya umgomo futhi ngeteksi. Kusukela ezinye iziteshi komhlaba emakethe "Gardener" hamba ibhasi unomphela: kusukela kaMasipala Kuzminki - №347; Metro Bratislava - №№410, 202, 520, 529; Metro Domodedovo - №165. Uma ungafuni ukuchitha imizuzu engu-20 elinde khulula Shuttle ibhasi, emakethe "Gardener" Pho, kungasindiswa esafinyelelwa kaMasipala Vykhino enanini Shuttle 558 kusukela Metro kanye Lublin kuya ku-118 noma 27. Ngaphezu kwalokho, ezitimeleni Kuzminki lapha uya edolobheni ibhasi # 655. Kusuka okubaliwe elula libonisa kanjani minibuses abaningi bayakwazi ukuletha amakhasimende emakethe "Gardener". Indlela ukufika kulo, ngokuvamile kubonakala inkinga lula kakhulu ukwedlula ukubuyela ekhaya nge ukuthenga zabo. Hhayi-ke, uma beza lapha ngemoto ipotimende elikhulu. By the way, emakethe "Gardener" has a yokupaka kahle esikhulu futhi elula.
"Gardener" (izingubo emakethe). Indlela ukufika kulo, futhi kanjani ukuze uthole emuva ekhaya
Ngaphandle ukuthenga ngeke ngisuke lapha kunjalo. Futhi kungenzeka ukuthi zigqila kuyoba kakhulu. Lapha amanani aphansi e Moscow. inqubomgomo emakethe okunjalo - ekwenziweni akuyona amanani entengo aphezulu, futhi umthamo kwezimpahla ithengiswe. Yingakho abantu beze lapha evela kude, hhayi kuphela ezicezile eMoscow, kodwa futhi kusukela nedlelo eduze. Kodwa uma kufika by zokuthutha umphakathi, ngemuva kungcono ukuthatha itekisi. Lena ukhetho best - ukulanda ebhuthini futhi uthenge kusuka induduzo okwenza uhambo reverse. Endleleni, "Gardener", ungakwazi afingqa isimo uhambo emakethe. Uyithola kanjani kuye, siyazi manje, uphinde ubuye lapha ukuze kube ngaphezu kwesikhathi esisodwa.
Gagra: izinto imibono ezithakazelisayo iholide
Ivangorod inqaba. Izikhangibavakashi of Leningrad Region
Three-iso ebhalwini incazelo, izithombe, ukuvakasha kungenzeka
Millennium - Ibhuloho eLondon, omunye ezikhangayo wokuqala kule nkulungwane entsha yeminyaka
Amazing Zakynthos. Isiqhingi: ukubuyekezwa kanye nokuzwa
Slide Alpine. Step by step Umhlahlandlela ilungiselelo nokunakekela
Povodochnitsa izandla zami siqu. Kanjani povodochnitsu ukondla ngezandla zabo?
Indlela ukupheka irayisi iphalishi ubisi nezinye okusanhlamvu?
Echibini Ezijulile (Ruza wesifunda, esifundeni eMoscow): incazelo, ukudoba kanye nokungcebeleka
Phlegm ku bronchi - Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
Imikhiqizo ogelezayo - a ukuthenga kangcono?
I-baked isinkwa ne-garlic kanye noshizi kuhhavini: iresiphi elula